Labo wiil oo Soomaali ah oo lagu eedeeyay argagixiso | Somaliska
Labo wiil oo soomaaliyeed oo haysta dhalashada dalka Sweden ayaa lagu eedeeyay in ay qorshaynayeen in ay weeraro waxa loogu yeero argagixada ka fuliyaan dalka Somalia. Sida ku cad warqada dacwada wiilasha kala ah Maxamud Jamac, 22, and Bille Ilyas Maxamed, 26 ayaa lagu eedeeyay in ay ka tirsanyihiin Xarakada Al-shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya. Labadan wiil oo lagu kala qabtay magaalooyinka Goteborg iyo Stockholm ayaa la sheegay in ay qorshaynayeen in ay weeraro ismiidaamin ah ka fuliyaan Soomaaliya. Xeer ilaaliyaasha ayaa sheegay in ay cadeyn u hayaan dambiyada lagu soo oogay wiilashaan ayagoo ka helay wareysiyo laga qaaday wiilsha, teleefoonadooda oo la dhagaystay iyo marqaatiyaal. Dhagaysiga teleefoonada wiilasha ayay ku sheegeen xeerilaaliyaashu in ay ka ogaadeen in wiilka lagu magacaabo Bille uu tababar ka soo qaatay Al-shabaab asagoo doonayay in uu noqdo mujaahid halka Maxamuud uu qorshaynayay in uu ismiidaamiyo. Wiilasha ayaa la filayaa in maxkamada la soo taago 28ka bishaan Oktoobar. Xigasho: The Local
Labo wiil oo Soomaali ah oo lagu eedeeyay argagixiso
Labo wiil oo soomaaliyeed oo haysta dhalashada dalka Sweden ayaa lagu eedeeyay in ay qorshaynayeen in ay weeraro waxa loogu yeero argagixada ka fuliyaan dalka Somalia.
Sida ku cad warqada dacwada wiilasha kala ah Maxamud Jamac, 22, and Bille Ilyas Maxamed, 26 ayaa lagu eedeeyay in ay ka tirsanyihiin Xarakada Al-shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya.
Labadan wiil oo lagu kala qabtay magaalooyinka Goteborg iyo Stockholm ayaa la sheegay in ay qorshaynayeen in ay weeraro ismiidaamin ah ka fuliyaan Soomaaliya.
Xeer ilaaliyaasha ayaa sheegay in ay cadeyn u hayaan dambiyada lagu soo oogay wiilashaan ayagoo ka helay wareysiyo laga qaaday wiilsha, teleefoonadooda oo la dhagaystay iyo marqaatiyaal.
Dhagaysiga teleefoonada wiilasha ayay ku sheegeen xeerilaaliyaashu in ay ka ogaadeen in wiilka lagu magacaabo Bille uu tababar ka soo qaatay Al-shabaab asagoo doonayay in uu noqdo mujaahid halka Maxamuud uu qorshaynayay in uu ismiidaamiyo.
Wiilasha ayaa la filayaa in maxkamada la soo taago 28ka bishaan Oktoobar.
Xigasho: The Local
Xiisad ka dhex taagan mid ka mid ah masaajidada soomaali maamusho ee Göteborg
Isticmaalka internetka iyo caruurta
Wasiiradda socdaalka ee Noorweey oo walaac ka muujisay dusiyada quraanka ee dibadaha loo aado